Amakhathuni angu-18 iminyaka kanye nomuntu omdala ku-intanethi - I-340 imidwebo e-inthanethi
I-Cartoons 18 plus
Sikunikeza iqoqo elisha opopayi plus 18 inthanethi 1990 2017 iminyaka ngaphambi umnyaka woyekelo animated amafilimu, esekelwe okuyinto indaba inkulumo yokulingisa. Ezimweni eziningi, i-cartoon yabaneminyaka yonke, ngokuvamile intsha ayibukeli imithetho kumasayithi omdala.
Iningi lohlu lwezinhlayizi zamahhala ngesiRussia, ngaphandle kolwazi lolimi lungathola ukuqonda kwezimpawu ekuphatheni kwabalingiswa. Izithombe ze-21 kubantu abadala zithola ukuthandwa, isidingo sokuqeda iminyaka yobudala sivela ngokuzenzekelayo kusukela ekuvezweni kwezinhlamvu ze-anime. Imikhawulo ephela emidlalweni yasendle ingenye yezindlela ongakhetha kuzo ukuze uphumule? Izithombe zezintandokazi zizovela ezithombeni ezingavamile. Ngangifuna ukubona ukuthi i-Rapunzel yayijabulisa kanjani, ididekile ngesikhathi se-blowjob ezinwele zegolide - sicela! Abathandi be-orgies bayothanda ividiyo emdala.
Ukhathele ukuphupha futhi ufuna lokhu kungcola? Woza uphinde ubheke imidwebo ekhangayo, ngoba i-anime iyazi mayelana nenjabulo engcolile yabantu abangempela. Ukubheka ukuzithokozisa okucebile kakhulu, futhi ufuna ukubuka ukukhanya ku-toon! Ukungazi amahloni, abalingiswa balungele ukuphazamiseka ngokobulili.
Ama-Comics kubantu abadala ngaphandle kokubhaliswa
Ama-Comic for Imiqophi Omdala
Sinikeza izivakashi zewebhusayithi engaphezu kwengu-18 ukuba ungakhathazeki, futhi ubukele izincwadi zethu yamahlaya abadala, kukhona izingxabano mayelana lokuthi ukuvuthwa ufika uphelele, avame lo mbono e 21 ngonyaka zenzeka ezingxenyeni ezisentshonalanga, abakhuluma isi-Russian ithobela ubuncane beminyaka ingaphansi kwe e-US.